Uvavanyo lokusebenza kwamakhadi evidiyo kwiWindows | Iindaba zeGajethi
Ungakufumanisa njani ukusilela kwiKhadi leVidiyo lethu ngaphandle kweWindows?
Ukuba kule mihla amakhadi evidiyo ayafana nokusebenza kakuhle kwaye asebenze kulo naluphi na uhlobo lwesicelo esisebenza kwiWindows, Kutheni besilela xa befuneka kakhulu?
Akukho mntu uza kuchaza isizathu sokuba oku kwenzeke, kuba nangona iWindows ifakiwe kunye nabaqhubi abafanelekileyo kunye nohlaziyo olongezelelekileyo, ikhompyuter yengozi kunye isikrini esihlaza okwesibhakabhaka, xa uqala ukwenza "umsebenzi ogqithileyo" ngeAdobe Photoshop okanye kumdlalo wevidiyo ofuna zonke izixhobo zenkqubo yokusebenza. Indlela elula kakhulu kwaye elula yokwenza ukubona ukusilela kwikhadi lethu levidiyo ixhomekeke kwisixhobo esilula, esinegama elithi "Uvavanyo lweNkumbulo yeVidiyo".
1 Izizathu ezinokubakho zokungaphumeleli kwekhadi levidiyo
2 Sebenzisa "uVavanyo lweMemori yoVavanyo lweVidiyo" kwiWindows nangaphandle kwayo
3 Iinguqulelo zokusetyenziswa kovavanyo lwe "Inkumbulo yeVidiyo"
4 Ukuvavanywa kwiikhompyuter ezindala kwikhadi levidiyo
Izizathu ezinokubakho zokungaphumeleli kwekhadi levidiyo
Imeko yokuqala ekufuneka uyiqwalasele ngaphambi kokuvavanya ikhompyuter yakho ngesixhobo, kukwazi ukuba uyifakile Iinguqulelo ezichanekileyo zabaqhubi zeso sixhobo. Kukho amaxesha apho IMicrosoft ihlala icebisa abaqhubi abafanelekileyo kwikhadi levidiyo ukuba uzifumene ekhompyutheni yobuqu, ezi ayizizo ezichanekileyo kodwa kunoko, "zezona zingenisiweyo". Ukuba unediski yofakelo, yisebenzise kwaye uqwalasele ikhadi levidiyo ngokokukhetha komenzi.
Sebenzisa "uVavanyo lweMemori yoVavanyo lweVidiyo" kwiWindows nangaphandle kwayo
Imangalisa njengoko inokubonakala, sisixhobo esilula esigama «Uvavanyo lweMemori yeVidiyo»Unokwazi vavanya ikhadi levidiyo, ukulawula ukufumana njengesiphumo, ukuba sikwimeko elungileyo okanye embi. Ngokwomphuhlisi, ukusebenza kwayo okuncinci kwee-megabytes ezimbalwa kunesakhono sokunika "uxinzelelo" olukhulu kwikhadi levidiyo, oko kuthetha ukuba iya kukuhlawulisa ngomsebenzi owongezelelweyo ukuze wazi ukuba ixhasa kude kangakanani.
Nje ukuba uye kwi-URL yomphuhlisi wayo uya kufumana iinguqulelo ezimbini ozisebenzisayo, enye ekukuqala kwephepha kunye nenye kutshintsho lokugqibela. Ukuba ukhetha iphakheji yokuqala kwaye uyivule izip kwiikhompyuter yakho yobuqu, unokucofa kabini okwenzekayo kwaye uqalise ukubona iziphumo. Iscreen esifana nale siza kubeka apha ngezantsi yile uyibonayo, apho umsebenzisi aya kuthi enze khona isigqibo sokuba leliphi ikhadi levidiyo ofuna ukulivavanya.
Kwimeko yethu, isixhobo sifumene amakhadi amabini evidiyo, ukuba ngomnye wabo oyintloko kunye nomnye owesibini kuba imodeli yekhompyuter ye-HP inezo zombini. Uvavanyo luya kubangela ukuba isisombululo silinganise kwaye iifestile ezimbalwa ziya kuqala ukuvela malunga nomsebenzi owenziwa sisixhobo.
Iinguqulelo zokusetyenziswa kovavanyo lwe "Inkumbulo yeVidiyo"
Umphuhlisi ukhankanya ukuba iimvavanyo zinokwenziwa ngelixa iWindows isebenza, kwaye le ayisiyiyo eyona ndlela iphambili njengoko ikhadi levidiyo lifumana umthwalo ngalo mzuzu Zonke izicelo kunye nezixhobo zenkqubo yokusebenza. Ngesi sizathu, kuya kufuneka uye kwenye yeefolda zayo zangaphakathi ukuze ufumane umfanekiso we-ISO, onokufikelela kuwo ukuthuthwa kwipendrive ye-USB ngesixhobo esifanelekileyo.
Ukuba ukhetha olu khetho, kuya kufuneka Qalisa kwakhona kwikhompyuter kunye nependrive ye-USB efakiweyo izibuko elifanelekileyo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokuvavanya ikhadi levidiyo, kuba ikhompyuter kunye nekhadi lemizobo alifumani naluphi na uhlobo lomthwalo kwinkqubo yokusebenza.
Ukuvavanywa kwiikhompyuter ezindala kwikhadi levidiyo
Ngaphandle kokuba imeko ekude kakhulu, kodwa umphuhlisi ubeke inxenye yokugqibela yewebhusayithi yakhe uguqulelo olo unokusebenzisa ngediski yediski; kukho iifayile eziyimfuneko kwisixhobo sokuqhuba kunye neelayibrari zazo, eziza kuhlalutya imeko yekhadi levidiyo kolu hlobo lwekhompyuter.
Kwelethu icala, sinokucebisa ukuba uzame faka abaqhubi abafanelekileyo kwikhadi lakho levidiyo, kuba ukuba ufake ezinye ezizezemodeli eyahlukileyo, uya kuhlala ufumana iimpazamo zokungazinzi kwikhompyuter yakho nakwisicelo ngasinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungakufumanisa njani ukusilela kwiKhadi leVidiyo lethu ngaphandle kweWindows?
Ukujongwa kwakhona kweParrot Zik 2.0
4 Iinketho zokujonga iifoto kunye nokuphepha ukuxhaphaza iJPEG kwiWindows